Asus ZenFone Max Pro M1 သည်ထိုင်ဝမ်၏စီးပွားရေးအလယ်အလတ်သစ်ဖြစ်သည် Androidsis
Asus ZenFone Max Pro M1 သည်စီးပွားရေးအလယ်အလတ်တန်းစားဖြစ်သည်
ထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီကြီး Asus က၎င်းကိုယူဆောင်လာသည် Asus ZenFone Max Pro M1 သည်စီးပွားရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များပါ ၀ င်သောဖုန်းဖြစ်ပြီးပျမ်းမျှအားဖြင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည် ဒါပေမယ့်အကောင်းတစ် ဦး terminal ကိုများအတွက်ရေငတ်နှင့်အတူ။
ဒီဖုန်းအများစုမှာထင်ရှားတဲ့အရည်အသွေးတွေထဲမှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှကျွန်ုပ်တို့နှင့်လိုက်ဖက်သည့်သက်ဆိုင်ရာစိတ်ကြိုက်အလွှာမရှိဘဲ Android operating system ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီ. ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
Asus ZenFone Max Pro M1 တွင် ၅.၉၉ လက်မ IPS LCD မျက်နှာပြင်နှင့် FullHD + resolution 5.99 x 2.160 pixels resolution ရှိသည်။ 18:9ရှုထောင့်အချိုးအစားနှင့် 2.5D Semi- ကွေးကောက်ဖန်ခွက်များအောက်တွင်အဆင်ပြေချောမွေ့စွာကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ အတွင်းပိုင်း၌ရှစ် core Core Qualcomm Snapdragon 636 ချစ်ပ်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည် (8x Kyro-260 1.8GHz) ဗိသုကာနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသော ၆၄bit ဗိသုကာနှင့် ၁၄ မီလီမီတာ RAM 64 / 14GB၊ သိုလှောင်နိုင်သည့်3/ 4GB သိုလှောင်မှုပမာဏနှင့် 32TB အထိသိုလှောင်နိုင်သည့် microSD ကဒ်ပြားတပ်ဆင်ထားသည်။ 5.000A / 2W အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းနိုင်ရန်အတွက်ကြီးမားသော 10 mAh ဘက်ထရီဖြစ်သည်.
ဓာတ်ပုံအပိုင်းမှာတော့ ဒီမိုဘိုင်းမှာ 13MP + 5MP နှစ်ဆနောက်ဘက်သေနတ်သမားပါရှိပြီး 2.2Af/ 80 focal aperture PDAF focus နှင့် LED Flash ပါရှိပါတယ်။။ ရှေ့ဖက်တွင်f/ 8 aperture နှင့် soft-ton LED Flash ပါသည့် 2.0-megapixel အာရုံခံကိရိယာရှိသည်။
အခြားအင်္ဂါရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း, ဒီဖုန်းက Android 8.1 Oreo ကိုစင်ကြယ်တဲ့ဗားရှင်းနဲ့လည်ပတ်စေတယ်ဖုန်း၏ကျောဘက်တွင်လက်ဗွေဖတ်စက်ကိုတပ်ဆင်ထားပြီး SIM အထောက်အပံ့နှစ်ခုရှိပြီးဖုန်းကိုသော့ဖွင့်ရန်မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုနည်းပညာကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဒါ့အပြင် အလေးချိန် ၁၈၀ ဂရမ်အလေးချိန်ရှိပြီး ၁၅၉ x ၇၆ x ၈.၆၁ မီလီမီတာရှိသည်.
Asus ZenFone Max Pro M1 ၏စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှု
ယခုအချိန်တွင်, Asus ZenFone Max Pro M1 ကိုလာမည့်မေလ ၃ ရက်နေ့မှစ၍ အိန္ဒိယစျေးကွက်တွင်သာရောင်းချမည်ဖြစ်သည် အရောင်အတွက် နက်ရှိုင်းသောအနက်ရောင် (အနက်ရောင်) နှင့် ဥက္ကာပျံငွေ (ငွေ)။
3GB internal memory ပါ ၀ င်သော 32GB RAM မော်ဒယ်လ်သည်ရူပီး ၁၀,၉၉၉ နှင့်ညီမျှပြီး ၁၃၅ ယူရိုသာကုန်ကျမည်ဖြစ်ပြီး 10.999GB ROM နှင့် 135GB RAM မူတန်ဖိုးမှာရူပီး ၁၂,၉၉၉ ရူပီးရူပီး ၁၆၀ နှင့်ညီမျှသည်။
6GB ROM ပါသောတတိယမြောက် 64GB RAM မော်ဒယ်ကိုလည်းကုမ္ပဏီကကြေညာခဲ့သည်။ 16MP + 5MP dual နောက်ကင်မရာနှင့် 16-megapixel ရှေ့ကင်မရာပါဝင်သည်။ ဒီရူပီး ၁၄,၉၉၉ (၁၈၅ ယူရိုခန့်မှန်း) ရှိမယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Asus ZenFone Max Pro M1 သည်စီးပွားရေးအလယ်အလတ်တန်းစားဖြစ်သည်
အတည်ပြုပြီး: OnePlus6တွင်ဖန်ခွက်တစ်ခုပြန်ကျလိမ့်မည်
Google Pay ကသင့်ကို boarding pass များနှင့်လက်မှတ်များထည့်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်